​महिला घर या अफिस कहाँ धेरै खुसी हुन्छन् ? यस्तो छ अनुसन्धानको नतिजा
Thursday, 21 Feb, 2019 4:42 PM
भर्खरै पेन युनिवर्सिटीले महिला सम्बन्धि एक अध्ययन गरेको छ । जसको नतिजा अनुसार महिलाहरू घरको तुलनामा आफ्नो कार्यस्थलमा धेरै खुसी रहने तथ्य पध्त्ता लगायो । यसको कारण यो हुन सक्छ कि महिलाहरू घरको तुलनामा कार्यस्थलमा कामको कम बोझ महसुस गर्छन् । तर यो हुदाहुदै पनि सबै कार्यस्थलबाट घर जाने हतारोमा नै हुन्छन् । एक हप्ता सम्म गरिएको अनुसन्धानमा १ सय २२ जनाले भाग लिएका थिए । मानिसमा हुने कोर्टिसोल जसलाई स्ट्रेस हार्मोन भनिन्छ, त्यसलाई लिएर परिक्षण गरिएको थियो । महिला र पुरुषको अलग अलग परिक्षण गरिएको थियो । अध्ययनले महिलाको नतिजाको बिपरित पुरुषहरू घरमा धेरै खुसी रहने पाइएको हो ।
सामाजिक र आर्थिक ब्याकग्राउड फरक भएपनि नतिजा लगभग समान रह्यो । सबैमा समानता यो पनि थियो कि विकेन्डको बेलामा सबैमा तनाव कम रहने पाइयो । अनुसन्धानमा यो पनि खुल्यो कि काम प्रतिको सन्तुष्टिले पनि यीनमा तनाव कम रहन्छ ।
आखिर महिला किन धेरै खुसी रहन्छन् ?
पुरुषहरू काम प्रति खुसी नभए पनि काममा जोडिरहेका हुन्छन् । अर्को तर्फ महिलाहरू यदि आफ्नो काममा सन्तुष्ट नभए काम छोड्ने तरखरमा लाग्छन् । यस अध्ययनमा यो पनि पत्ता लागेको छ कामकाजका महिला जसको बच्चा हुन्छन् उनीहरु कम तनावमा रह्न्छन् । अनुसन्धानले बच्चाकोे कारणले महिलाले आफ्नो तनाव कम गर्छन् । घरमा महिलाले धेरै थरिका काम गर्नु पर्ने र अफिसमा एउटै काममा ध्यान केन्द्रित गर्ने हुनाले पनि अफिसमा धेरै खुसी रहने खुलेको हो । तर यो सबैमा लागु नहुन पनि सक्छ ।